व्हिस्की पिउने महिलाहरूलाई प्रायः सोधिने शीर्ष पाँच प्रश्नहरू-उद्योग समाचार-गोआलोङ लिकर (समूह)
व्हिस्की पिउने महिलाहरुका शीर्ष पाँच प्रश्नहरू प्रायः सोधिन्छन्
जब एक केटीले व्हिस्कीको मजा लिन्छ, केहि शर्मिला समस्याहरूबाट बच्न गाह्रो देखिन्छ, अब हामी यी "लज्जास्पद" समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यदि तपाइँ केटी हुनुहुन्छ भने, तपाइँ पछि कसरी लड्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ए केटा, यी "अप्ठ्यारो" विषयहरूको बारेमा कुरा नगर्नुहोस् जब तपाईंका महिला साथीहरूले व्हिस्की स्वाद लिनुहुन्छ।
1. व्हिस्की मानिसको पेय हो, हैन?
व्हिस्की प्रायः काउबॉय र सिगारसँग सम्बन्धित छ, तर केटीहरू पनि ह्विस्की र सिगारको मजा लिन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्, होइन? तर केही स्रोतहरूले देखाउँछन् कि आज व्हिस्की पिउने महिलाहरूको संख्या 1990 को दशकदेखि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। उत्तर अमेरिकामा सबै व्हिस्कीको चालीस प्रतिशत केटीहरूको लागि हो, र व्हिस्कीको लागि मुख्यधारा महिला उमेर समूह अहिले 25 देखि 52 वर्षको छ।
2. के तपाइँ एकल माल्ट व्हिस्की र बोरबोन बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्नुहुन्छ?
एकल माल्टको कच्चा पदार्थ जौ हो, जबकि बोर्बोनको कच्चा पदार्थ प्रायः मकै हो। तर स्पष्ट रूपमा, यो धेरै फरक पर्दैन कि तपाइँ यसलाई थाहा छ वा छैन, यो जस्तै।
3. के तपाईलाई व्हिस्कीको स्वाद साँच्चै मन पर्छ?
महिलाहरू वास्तवमा मदिराको मजा लिन आफ्नो तालुलाई संलग्न गर्न सक्षम हुन्छन्, वास्तवमा, केटीहरूसँग पुरुषहरू भन्दा बढी स्वाद कलहरू हुन्छन्। त्यसकारण, महिलाहरू सामान्यतया विभिन्न व्हिस्कीहरू बीचको सूक्ष्म भिन्नताहरू स्वाद गर्न सक्षम हुन्छन्। र फिर्ता सोध्नुहोस्, त्यसोभए तपाईले वास्तवमा कुन शैली स्वाद गर्नुभयो?
4. व्हिस्की तपाईको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन, हैन?
वास्तवमा, अधिक पिउन, केटा र केटीहरु संग धेरै गर्न को लागी आवश्यक छैन कि को आवश्यक छैन को हेर,। संयमतामा व्हिस्की पिउनुका धेरै फाइदाहरू छन्। उदाहरण को लागी: मधुमेह नियन्त्रण।
यदि तपाईं व्हिस्की पिउन मन पराउने केटी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले अरू कुन "लज्जास्पद" समस्याहरूको सामना गर्नुहुनेछ? तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ ~
अर्को: स्कटिश व्हिस्की' ब्यारेल निर्माता 'प्रशिक्षुता बार मिट्जवाह